Ungayivelisa njani imifanekiso kwiAdobe Illustrator, ngokulula nangokukhawuleza | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lola ifani | 10/02/2021 11:49 | Izixhobo zoYilo, Umzekeliso
Xa vector, into esiyenzayo kukuguqula umfanekiso okwi-bitmap, umzekelo kwifomathi ye-jpg okanye ye-png, ibe ngumfanekiso wevektha (SVG). Koko kukuthi, Sitshintsha iipekseli kwiivenkile.
Ukusebenza ngemifanekiso yevektha kunezibonelelo ezithile, ezi inokukalwa ngaphandle kokugqwetha kwaye zikulungele ukuhlelwa. Kule tutorial, siyakuxelela ungayifaka njani imifanekiso usebenzisa iAdobe Illustrator. Kuqala, siza kwenza umzekeliso, kwaye emva koko siyaphinda inkqubo kunye nefoto.
1 Vectorize umzekeliso
1.1 Yenza i-artboard entsha kunye nomfanekiso ovulekileyo
1.2 Sebenzisa ipaneli yokulandelwa kwemifanekiso eyi-«kwaye uyisebenzise kumzekeliso
1.3 Yenza i-vector yakho ihleleke kwaye ususe imvelaphi
2 Kwenzeka ntoni xa sikhupha umfanekiso?
Yenza i-artboard entsha kunye nomfanekiso ovulekileyo
Masiqale ngokwenza i-artboard entsha kwi-Illustrator, kuba kufuneka ucofe kuyo «Ifayile», phezulu kwesikrini, kwaye ukhethe "entsha". Ndiza kuyenza ubungakanani be-A4 kwaye ndiza kuyibeka ngokuthe tye.
Ke siza kuvula umzekeliso. Ungayenza ngeendlela ezintathu:
Ukutsala ngokuthe ngqo umfanekiso kwifolda
Ukucofa> iifayile> indawo
Sebenzisa indlela emfutshane yokutshintsha
Ndikhuphele nawuphi na umzekeliso kwi-intanethi kwaye ndiza kuwusebenzisa. Ukuba ujonga kwaye usondeza ngokwaneleyo, uya kubona ukuba umfanekiso uneepikseli, xa siyifaka vectorize ezo pixels ziya kunyamalala. Ndiza kuwuphinda lo mzekeliso ukuze ubone utshintsho nokwahluka, kodwa ukuba uyafuna, ungatsiba eli nyathelo.
Sebenzisa ipaneli yokulandelwa kwemifanekiso eyi-«kwaye uyisebenzise kumzekeliso
Ngoku masivule iphaneli "yokulandela umfanekiso", onokuyifihla. Ukwenza iiphaneli kunye nezixhobo zibonakale kwi-Illustrator kufuneka uzenze kwi "window" tab (kwimenyu ephezulu). Ke Sizakuya kwi "window" naphakathi kwazo zonke iindlela onokukhetha kuzo siya kukhetha "ukulandelwa komfanekiso".
Cofa kumzekeliso, nakwipaneli yokulandela umfanekiso, siza kukhetha ifayile ye Imowudi "yombala". en "jonga", Kuya kufuneka ukhethe "Iziphumo zophando". Ngasentla, unokukhetha othi "Cwangcisa kwangaphambili" Kwaye kuloo menyu incinci unokhetho oluninzi onokukhetha kulo. Ukukhetha enye okanye enye kuya kuxhomekeka kwinqanaba lokuchaneka esikhangele kuyo ngokutshintsha umfanekiso we-bitmap ukuya kumfanekiso wevektha. Masibone ezinye zazo:
Kwimeko ye ongakhetha 3, 6 yaye 16 imibala Ibhekisa ku ubuninzi bemida ukuba isetyenziswe kwisiphumo sokulandelela. Ukuba usebenzisa imibala eli-16 uza kubona ukuba kulo mzekeliso sifumana iziphumo ezilungileyo. Ukuba sele sihlile saya kumbala emi-6 siphulukana neenkcukacha kwaye ukuba siyehla siye ku-3 nangaphezulu. Ngokucinezela iliso, ibekwe ngasekunene kwepaneli yokulandela umfanekiso ecaleni kokhetho "lokujonga", uya kuba nakho ukubona umahluko phakathi komthombo wemvelaphi kunye nokulandelwa esinako ngoku. Sondeza kwaye uza kubona ukuba iipekseli sele zanyamalala.
Ifoto ye-Hi-Fi kunye nokuseto kwefoto yokunyaniseka okuphantsi zihlala zisetyenziswa xa sineefoto okanye imizekeliso eneenkcukacha ezininzi, kuba imizekeliso elula ngokungeyomfuneko. Ungasifaka isicelo, ukuba uyasifaka, umzekelo, "ifoto ethembekileyo ephantsi" nayo iyakubonakala intle.
Zininzi ezinye iisetingi kunye neemowudi. Ukuba ukhetha i "grayscale" mode okanye ukuba kwi "presets" ufake "shades ezingwevu" uzakufumana vector kwiithowuni ezingwevu. Ukukhetha imo "emnyama nomhlophe" okanye ukuseta kwangaphambili "umzobo womzobo" kuya kwenza uhlobo lomzobo.
Okwangoku siza kukhetha useto lwe "16 imibala".
Yenza i-vector yakho ihleleke kwaye ususe imvelaphi
Siza kuba nomfanekiso we vector, kodwa ngoku ndiza kukubonisa iqhinga ukuze uguqule kwaye uhlele ngokukhawuleza. Xa sinomfanekiso we vector owenziwe nge-Illustrator, enje ngale nkwenkwezi, sisebenzisa isixhobo "sokukhetha ngqo" sinokukhetha amanqaku e-anchor kwaye sinokuwuguqula ngendlela esithanda ngayo. Kwelinye icala, ukuba sinika i-vector esiyenzileyo, asinakwenza nto.
Ukuyicombulula, khetha umzekeliso, kwaye kwimenyu ephezulu, yiya ku into> yandisa. Kwimenyu eya kuvulwa, siya kuphawula "into" kwaye "gcwalisa". Ngesi sixhobo, esikuphumezayo kukwahlulahlula into kuzo zonke izinto eziyila, ukuze sikwazi ukuguqula nganye yazo ngokuzimeleyo. Singazicima izinto, sitshintshe imibala, sizisuse, sizilinganise ...
Oku kuyakuvumela ukuba ucime imvelaphi yevektha. Ukuba ususa umzekeliso kwibhodi yezobugcisa, uya kubona ukuba inemvelaphi emhlophe, njengoko ufake "ukwandisa" ngesixhobo esikhethiweyo sokukhetha, unokukhetha imvelaphi kwaye uyisuse ngokulula ngokunqakraza iqhosha elingasemva lesitshixo kwikhibhodi.
Kwenzeka ntoni xa sikhupha umfanekiso?
Kule nxalenye yesifundo, ndikhethe ifoto enesisombululo esiphakamileyo, enyanisweni, kufuneka ndikhulise okuninzi ukuze ndikwazi ukwahlula iipekseli. Inkqubo iya kuba ngokufanayo. Siza kufaka "ukulandelela umfanekiso", kodwa ngeli xesha endaweni yokusetha imibala eyi-16 siza kunika ifoto ukuthembeka okuphezulu.
Ukuba ukhethe umfanekiso omkhulu njengowam kunokwenzeka ukuba ufumane umyalezo ekucela ukuba uhlengahlengise umfanekiso ukuze ukwazi ukufaka umkhondo. Ukuhlengahlengisa imifanekiso, sinika «Into» (itab kwimenyu ephezulu)> «rasterize».
Ngokunokwenzeka, ekuboneni kokuqala awuyi kuqaphela naluphi na utshintsho, kodwa ngoku sinokusebenzisa uhlengahlengiso lwefoto Ukunyaniseka okuphezulu. Xa uyifaka, sondeza ukuze ubone ngcono, uya kubona ukuba senze uhlobo lwe Ipeyinti eyiyo eyiyo. Ukuba endaweni yokunyaniseka okuphezulu ufaka isicelo Ifoto yokunyaniseka esezantsi, esi siphumo sokuzoba siya kugxininiswa ngakumbi.
Ngokucofa u "yandisa", njengoko senzile ngomzekeliso wangaphambili, sinokulungisa iindawo zomzobo ezingasiqinisekisiyo kakhulu, nkqu singayaphula ukuze senze ezinye izinto ezingafakwanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Umzekeliso » Ungayivelisa njani imifanekiso kwiAdobe Illustrator